Kwintsapho yeCacti unokufumana uhlobo olufana ne-Epiphyllum. Kwafunyanwa ngo-1812, kuba igama layo lesiGrike lisetyenziswe, eliguqulelwe lithetha "phezu" okanye "ngaphezulu" kunye "neqabunga", kwaye uAdrian Havort wenza. Ngaloo ndlela, kugxininiswe ukuba kumaqabunga esi sityalo kukho iintyatyambo ezimnandi. Nangona, ngokwenene, kungekhona iinduli, kodwa iziqu ezitshintshileyo.
Kwi-genus ye-epiphyllums, unokubala iintlobo ezi-20 zezityalo eziye zasasazeka kwiindawo ezininzi zaseMelika, ezivela eMexico ukuya eTropiki. Ziyizona zihlahla ezinqamlezileyo, ezinezityalo ezinwabuzelayo kunye nesinyama esinomzimba, esinomfanekiso weqabunga; umgca kwiphepha eneenkcukacha. Kwimihlaba yebhola ibonakale esikhaleni esincinci - eli lizayo. Iintyatyambo zezi zityalo zikhulu, zinomfanekiso we-funnel, ne-tube long ende; iphunga leentyatyambo linamandla kakhulu.
I-Epiphyllum inemibala ebanzi kakhulu embala: ukusuka kumhlophe ococekileyo kunye nococeko, kumthunzi obomvu nebomvu; kodwa abanalo ientyatyambo eziluhlaza. Iintyatyambo zezi zityalo zihle kakhulu kangangokuthi zibiza i-orchid phakathi kweCacti.
Xa ukhula ngaphakathi kwindlu, nangona xa utywala imfuyo, i sityalo sinokuba neziqhamo ezinkulu. Iintlobo zinemibala ebomvu okanye eluhlaza okwesibhakabhaka, kuxhomekeke kwintyatyambo ngokwayo; Ngokuqhelekileyo isiqhamo sihlanganiswe neentsiba. Inyama inomsoco ocolileyo kwaye oqinileyo, kodwa intleko ifana nomxube wephayinaphu kunye nama-strawberries.
Kukho ama-hybridi angamawaka amabini e-epiphyllums, ngokugqithiseleyo kuthiwa yi-phylocactus. I-cacti enjalo ifanelekile ukuhlobisa njengengoma ye-ampel.
Ukukhanyisa. Iindlu zendlu epiphyllum abathandi bokukhanya okuqhaqhaqhashekileyo kunye nokusabalalisa, nangona i-penumbra kubo ayithintelo. Kodwa ngokungabikho kokukhanyisa, ukukhula kunganciphisa okanye iziqu zitshintshe. Ziyakhula kakuhle kumacala asentshonalanga nangasempuma, ngelixa isalathini esenyakatho i-bloom ingabi namandla, kwaye kusezantsi emthunzini wemini kuyadingeka. Ehlobo, kucetyiswa ukuba uveze i-epiphyllum emoyeni omtsha, indawo apho kukho ukukhanya okukhulu, kodwa akukho lilanga elithe ngqo.
Ulawulo lokushisa. Ukuba sithetha ngobushushu, emva kwentwasahlobo ukuya ngasekupheleni kwehlobo, bakhetha ukushisa kwe-20-25C. Kwaye lonke ixesha, iqondo lokushisa liyancitshiswa kakhulu kwi-10-15 ° C.
Ukunisela. Izilwanyana ze-epiphyllum zidla ngokuba zibizwa ngokuthi iCacti yamahlathi anamanzi, ngoko zifuna ukuthambisa okuninzi; Kuyimfuneko ukugcina umhlaba uhlale umanzi, ngamanzi, ngokukhawuleza xa uluhlu oluphezulu lomhlaba lumile. Kuyinto enqwenelekayo ukusebenzisa amanzi athambileyo kwaye afudumele. Kwixesha lekwindla-ebusika, ukuncitshiswa kuncitshiswe kancinci, kuncitshiswa, xa kungekhona nje uluhlu oluphezulu luba, kodwa umhlaba wonke. Ukuba ubusika bubanda kakhulu, ngoko isityalo asinanzi. Ekuqaleni kwentwasahlobo, ukuhlambela kwakhona kuphinda kuhlaziywe ukuba kulandelelanise, kwaye xa ihluma sele isele ininzi.
Ukuthotywa komoya. Iimfuno ezicacileyo zokungcola komoya, isityalo asibonisi, kodwa sikhetha ukunyuka kwamanzi. Kwaye ehlotyeni, kushushu, kuya kuba mnandi ukutshiza izityalo ezinobumba ngamanzi.
Ukugqoka okuphezulu. Ngentwasahlobo nasehlotyeni, isichumisi kufuneka ifakwe kwi-pot nge epiphyllum, oku kwenziwa kabini ngenyanga; esifanelekileyo kwisichumiso sesichumiso esiqhelekileyo. Xa kuvela amaqabunga, ungongeza iMollein ngokuxuba ngamanzi kwisilinganiselo se-1: 4, ngokulandelanayo. Xa kuqhutywa izimbali kuze kube sekupheleni kuka-Agasti, i-mullein inokutya rhoqo kwiiveki ezimbini. Ukuba unqwenela, i-mullein ngamanye amaxesha inokuthi ithatyathwe indawo kunye nesichumisi se-nitrogen.
Imifuno. Ekupheleni kwebusika, isityalo siqala ukukhula, iifama ziqala ukufakwa. Ngeli xesha, akufuneki ukulungiswa kwakhona kwesityalo kwenye indawo, kungenjalo iyakwazi ukulahla.
Ukuqhakaza kwe-epiphyllum kuqala ngokuqala entwasahlobo, nge-Epreli. Intyatyambo nganye kwisityalo ihlala iintsuku ezintlanu. Ngeli thuba, isityalo sidinga ukuthambisa rhoqo, ukuchumisa, akuvumelekanga ukuphalaza. Ukuba iimeko zikhululekile, ngoko isityalo sinokuphinda siqhame ekwindla.
Ientyatyambo ekudubeni zenziwa kanye, ngoko ke, kwiminyaka embalwa onke amahlumela amadala kufuneka asuswe, kuba akuyi kuba neentyantyambo kuzo. Ukongezelela, isityalo ngezinye izihlandlo sinezihlwele, zikulungele ukususa, ngenxa yokuba nabo, nabo, banokuthi bangaqhiphuki.
Ukutshintshwa kwezityalo. Ukuba kuyimfuneko ukutshintshela isityalo, ngoko kuyinqweneleka ukwenza oku emva kokugquma. Kunyaka ngamnye, oku akusi mfuneko, kuba iimeko ezikufutshane ebhodweni zivuselela izimbali ze-epiphyllum. Amandla afanelekileyo aplani kwaye abanzi, kuba Inkqubo yeengcambu ayizange iphuhliswe. Ukusetyenziswa komhlaba kusetyenziswe umxube weqabunga kunye ne-turf land, yongeza isanti kunye namalahle, okuyiyo phambi kokuchotshozwa. Amaqabunga omhlaba adinga iingxenye ezine, izithako eziseleyo kwicandelo elinye. Nangona kunokwenzeka ukusebenzisa umxube olungiselelwe ukusuka kwisitoreji, esifanelekileyo kwi-cacti; Kuyinto enqwenelekayo ukuba umxube ukhona kwininzi yepeat. Ubungakanani bomhlaba abuyi kuba namandla, kwaye i-lime kufuneka ingabikho ngokupheleleyo. Ngaphambi kokuba utshintshwe, isityalo akufanele sinyulwe iintsuku ezimbini, ngoko ngexesha lokutshintshwa komhlaba umhlaba ovela kwingcambu uya kulahla kakuhle. Emva kokutshintshwa, isityalo kufuneka sibekwe emthunzini kwaye sisele ngokulumkisa.
Ukuzaliswa. I-Epiphyllum - izityalo, ukuveliswa kwazo ezinokuthi zenziwe ngeendlela eziliqela-ngeembewu kunye nokusika (oku kwenziwa ngasekupheleni kwentwasahlobo), kunokwenzeka kwakhona ukwahlula iimodeli ezindala ngexesha lokutshala.
Ukuba uhlwayela imbewu ye-epiphyllum, ngoko kwimeko encinane i-cacti kunye neziqu kunye neentlobo ezininzi zeentsipho ziya kuza phezulu. Ngokuhamba kwexesha, iziqu ziya kutshabalala, ameva aya kuwela kwaye iziqu ziya kuba ziqabunga. Iqondo lokushisa elungele ukuhluma kwembewu ngu-20-25C. Ukuba izimo ezikhulayo ziyazikhulula, ke isityalo esincinane siya kunika iintyatyambo ngomnyaka wesine-wesihlanu.
Ukuba ufuna ukusabalalisa izicucu, ukusuka kwipuphu ephothiweyo, nquma u-12 cm ubude, kwaye isiseko kufuneka sibukhali ngendlela yontathuthathu, ke somile kwaye sityalwe ebhodweni. Kubalulekile ukuwomisa ngale ndlela elandelayo: isitshi sibeka kwi-container iintsuku eziliqela, ukucoca iJusi, kwaye emva koko kunokutsalwa. Umxube womhlaba ulungiswe ukusuka kumhlaba oqinileyo kunye ne-turf, enye kunye neengxenye ezimbini ngokulandelana kunye nokongeza kwe-0.25 iinxalenye zesanti. Phezulu komxube kubalulekile ukufefa isanti. Izicucu zinqumle ukuya kwi-1 cm enzulu kwaye zifakwe emthunzini. Ngomhla wokunqunqa awukwazi ukunisela. Emva kokuba iinqununu zineengcambu, kuyimfuneko ukuzityala ngeengqayi ezincinane.
Ukuba umhlaba uphazamisa ebhodweni, iingcambu zingase ziqale ukubola, ingakumbi ukuba isityalo sihlala sishushu.
Ukuba isityalo sityalwa kwindawo evulekile, i-slugs ingabonakala.
Kwakhona, isityalo sinokusuleleka kwintsholongwane yefungal, umzekelo, i-fusarium. Ukusuka kule ndawo kwisityalo kufana neentlobo ezimiselweyo, ezichaziweyo, ezikhulayo ngobukhulu.
Unokuhlaselwa yi-spider mite, aphids, scabbard okanye i-mealybug.
Orchid Macodes yasePetola
Indlela yokukhulisa i-dahlias enhle nekulu ekhaya?
Gardenia jasmine: ukunakekelwa, ukulima
U-Polina Gagarina okwesibini waba ngumama waza wabonisa isithombe sokuqala "esikhulelweyo"
Unokukunceda njani umntwana osemtsha ukuba ayeke ukutshaya
Ikhekhe lebhokisi lebhokisi lebhotela
Igumbi elitsha - iingxaki ezintsha
Ubugcisa bokukhohlisa amadoda, ukudlala ngothando
Ukuphilisa amaHlbs kwiMpilo yabasetyhini